Akụkọ - Nkowa dị mkpirikpi nke mmepụta ihe na teknụzụ njikọ igwe
Nkowa nkenke nke Mmepụta Round Link Steel Chain Production na Teknụzụ
Gburugburu njikọ ígwè yinye mmepụta usoro:
Mwepu mmanya, ịgba ihu oyi, njikọta, ịgbado ọkụ, mmezi nke mbụ, ọgwụgwọ ọkụ, nhazi nke abụọ (akaebe), nyocha. Ịgbado ọkụ na ọgwụgwọ okpomọkụ bụ usoro dị mkpa na mmepụta nke nchara njikọ njikọ ígwè, nke na -emetụta ogo ngwaahịa a ozugbo. Ngalaba ịgbado ọkụ nke sayensị nwere ike melite mkpụrụ ma belata ọnụ ahịa mmepụta; Usoro ọgwụgwọ ọkụ kwesịrị ekwesị nwere ike inye egwuregwu ihe zuru oke ma melite ogo ngwaahịa.
Iji hụ na ịdị mma nke ịgbado ọkụ nke nchara na -ejikọ agbụ ígwè, iwepu arc akwụkwọ ntuziaka na ịgbado ọkụ butt kagburu. A na -ejikarị ịgbado ọkụ ọkụ ọkụ butt n'ihi ogo akpaaka ya, ike ọrụ dị ala, ịdị mma ngwaahịa kwụsiri ike na uru ndị ọzọ pụtara ìhè.
Ka ọ dị ugbu a, a na -ejikarị usoro ịgbanye ọkụ ọkụ na -aga n'ihu na -akwụsịcha na usoro iwe ọkụ na ọgwụgwọ ọkụ nke agbụ ígwè na -ejikọ ọnụ. Ihe kacha mkpa na -eme ka ikpo ọkụ kpalite ọkụ bụ na a na -akwalite usoro ihe dị n'ime ala n'okpuru oghere elektrọnik, molekul na -enweta ike wee na -akụkọta iji mepụta okpomọkụ. Mgbe a na -eduzi ọgwụgwọ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkara oge, a na -ejikọ inductor na ugboro ugboro na -agbanwe agbanwe ugbu a nke ụfọdụ ugboro, yana ihe na -arụ ọrụ na -aga n'otu ọsọ dị na ihe mmetụta, ka induction ugbu a nwere otu ugboro na ntụgharị ihu ga -adị. ewepụtara na workpiece, nke ga -agbanwe ike eletrik ka ọ bụrụ ike ọkụ, a ga -ejikwa ihe arụ ọrụ ahụ mee ka ọ dị ọkụ site na ịgbanyụ na iwe ọkụ na obere oge.
Igwe na -eme ka ọkụ na -agba ọkụ na -ajụkarị nwere uru nke ọsọ ọkụ ngwa ngwa, obere ọxịdashọn, ezigbo usoro na -akwụsị akwụsị na nha ọka austenite mgbe emenyụchara, nke na -eme ka ike na ike nke njikọ njikọta dị mma. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara uru nke ịdị ọcha, ngbanwe dị mfe yana arụmọrụ nrụpụta dị elu. N'ọkụ iwe, oke iwe ọkụ na mpaghara ịgbado ọkụ njikọ nwere ike wepu nkụda mmụọ nke ime n'ime obere oge, nke nwere mmetụta dị oke mkpa iji melite plastik na ike nke mpaghara njikọ njikọ njikọ yana na -egbu oge mmalite na mmepe. nke cracks. Okpomoku nke dị n'elu ubu dị ala, ike ya na -adịkwa elu karịa mgbe iwe kpasuru ya, nke na -enyere aka na -eyi akwa njikọ na usoro nke ịrụ ọrụ yana megide mgbachi dị n'etiti njikọ agbụ na mpekere ahịhịa.